[डायरी] सुविधा कि सास्ती ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
[डायरी] सुविधा कि सास्ती ?
जेष्ठ ४, २०७६ गोकर्ण गौतम
यही सोमबारको आलो पीडा पोख्छु पहिले  । थापाथलीबाट लाजिम्पाट जानु छ  । टुटलमा राइडर सर्च गरें । एसेप्ट भयो । फोन पनि आयो । उनैले भने, ‘म नर्भिक नजिकै छु । नेपाल राष्ट्र बैकअगाडि गएर बस्नुस् । पाँच मिनेटमा आइपुग्छु । रातो टिसर्ट लगाको छु ।’ उनले भनेजस्तै गरें ।
टन्टलापुर घाम लागिरा’छ, बाटो छेउ उभिएर कुर्दै छु । पाँच हैन, दस मिनेट बित्यो । न फोन आयो, न बाइकवाला । बरु रातो टिसर्ट धर्नेलाई हेर्दा–हेर्दा आँखा थाक्न लागे । ढिला भइसक्यो । छटछटी भयो । आफैंले फोन गरें । उठेन । फेरि गरें, अहँ उठेन । क्यान्सिल गरेर नयाँ राइडर खोज्न त्यहाँ वाईफाई थिएन, मोबाइल डाटाको ताल उही हो । फेरि नम्बर डायल गरे, रिङ गयो तर काटियो । अबचाहिँ हार मानें । ट्याक्सी चढें ।
धन्न ! ट्याक्सीवाला सज्जन परेछन् । मिटरमा जान माने ।
लाजिम्पाट पुगेर भेटघाटमा व्यस्त भएँ, धोका दिने राइडरलाई बिर्सिसकेको थिएँ । इमेलको नोटिफिकेसन आयो । यस्तो लेखिएको रहेछ, ‘तपाईंको यात्रा पूरा भयो । ह्याप्पी टुटलिङ ।’ अबचाहिँ कन्पारो तात्यो । २० मिनेट खेर गयो । मानसिक तनाव झेल्नुपर्‍यो । राइडरले ठाडै बदमासी गरे । त्यसको निगरानी छैन । उल्टै ‘ह्याप्पी टुटलिङ’ रे । यही हो त, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग ? सबै व्यथा बिसाएर अनि हल्का रिस मिसाएर इमेल रिप्लाईं गरें । सेवा पाइएन, समय मात्र गयो, फोकटमा । तपाईंलाई लाग्ला, यत्तिमै यत्रो लेख नै लेख्नुपर्छ त ? पर्दैन्थ्यो, यदि यसअघि पनि यस्तै ठक्कर नखाएको भए । सबै व्यथा पोखें भने अरू केही नपाए पनि तपाईंबाट सहानुभूतिचाहिँ पाउँछु पक्कै । उस्तै परे, तपाईं मेरो सहनशीलताको प्रशंसक पनि बन्नुहोला ।
अब अघिल्लो दिन अर्थात् आइतबारको सास्ती सुनाउँछु ।
वनस्थलीबाट थापाथली पुग्नु छ । माइक्रो चढूँ, ठेलमठेल, पेलम्पेल । जाम पर्‍यो भने अर्को फसाद । ट्याक्सी छोइसक्नु हुन्न । टुटल नै खोलें । ब्यालेन्स सकिएछ, डिजिटल पेमेन्ट सेवाप्रदायक एप्स खल्तीबाट आठ सय रुपैयाँ टप–अप गरें । खल्तीबाट ब्यालेन्स घट्यो, पैसा गएको सन्देश पनि आयो । १५ मिनेट कुरें तर टुटलमा देखिएन । हतार थियो, त्यसैले हाताहात पैसा दिने सर्तमै राइडर बोलाएँ ।
चार घण्टा बित्यो तर ब्यालेन्स बढेन । कति चुस्त ? पैसा त्यत्तिकै हराउला भन्ने भय सुरु भयो । खल्तीमा फोन गरें, पैसा गइसकेकाले टुटलमै सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे । टुटलको फोन उठाउने युवतीलाई एक मिनेट लगाएर सबै कथा सुनाएँ, उनले बडो आत्मविश्वासका जवाफ फर्काइन्, ‘टप–अप हुन त २४ घण्टा लाग्छ । वेट गर्नुस् ।’ उनलाई अरू बेला १०–१५ मिनेटमा हुने गरेको जाहेर गरें । ग्राहकको समस्या सुल्झाउन बसेका कर्मचारीलाई कम्पनीको आधारभूत ज्ञानसमेत छैन । त्यसपछि फोन अरू कोहीलाई दिइनँ, ती पुरुषले ‘राइडर कि कस्टमर’ बाट वार्ता सुरु गरें । फेरि जस्ताको त्यस्तै कथा सुनाएँ, तीन मिनेट गइसक्यो । पैसा आफैंले हाल्नु छ, तैपनि यस्तो लफडामा फसियो । उफ ! ती महोदयले खल्तीबाट पैसा आउँदै नआएको ठोकुवा गरे । उनकै आदेशबमोजिम म बबुरो फेरि खल्तीमा फोन गर्न विवश भएँ ।
खल्तीमा अरू कसैले फोन उठायो । फेरि इतिवृत्त पोख्नुपरिहाल्यो । उनले उस्तै दाबी गरे, ‘पैसा गइसकेको छ, नपत्याए तपाईंको इमेल भन्नुस्, म पेमेन्ट सिट सेन्ड गरिदिन्छु ।’ मैले त्यस्तै गरें, प्रमाण आयो । फेरि टुटलमा फोन गरें । अरू कसैले फोन उठायो । पुनः उही बिन्ती बिसाएँ । उनले इमेल ठेगाना दिँदै सिट पठाउन भने । त्यस्तै गरें, एक छिनमा रिप्लाई आयो, ‘यो किन मेल गर्नुभएको, सविस्तार लेख्नुहोला ।’ कस्तो ताल, हेर्नु त ? बेवास्ता र हेल्च्याक्र्याइँको पराकाष्ठा भएन र ? आठ सयको सवाल छ, फेरि त्यहाँ पनि सबै कथा लेखेर पठाएँ । रिप्लाई आएन । अढाई घण्टापछि बल्ल टप–अप भयो । तर आफ्नो कमजोरीले उपभोक्तालाई परेको असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै इमेलसम्म आएन । कस्तो स्मार्ट र जवाफदेही सेवा ?
अब टुटलजस्तै अर्को मोटरसाइकलमार्फत सेयर राइडिङ सेवा प्रदान गर्ने एप्स पठाओको कहानी भन्छु ।
खासमा म पहिले पठाओ प्रयोग गर्थे । अति ल्याङल्याङ भएपछि टुटलतिर लहसिएको हुँ ।
निजी सवारीसाधनले पैसा लिएर यात्रु ओसार्न नमिल्ने प्रावधान छ हामीकहाँ । त्यसैले गत माघमा टुटल र पआठोका चार राइडर्सलाई प्रहरीले समात्यो । तर यात्रुलाई सुबिस्ता हुने अनि रोजगारीको सिर्जना गरिरहेकाले यिनलाई रोक्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भयो । प्रविधिको विकाससँगै नियम–कानुन परिमार्जन हुनु जरुरी पनि छ । त्यसैले टुटल–पठाओले व्यापक जनसमर्थन पाए । भुल्न नहुने तथ्यचाहिँ, त्यतिबेला टुटल–पठाओप्रतिको प्रेमभन्दा ट्याक्सीप्रतिको आक्रोश र वितृष्णा ज्यादा थियो । जे होस्, फाइदा यी एप्सलाई नै भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत साथ दिए । सबभन्दा ठूलो उपलब्धिचाहिँ, टुटल–पठाओको सित्तैमा प्रचार भयो । पहिले प्रयोग गरेकाले खुब तारिफ गरे । नयाँ प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढे । एउटा उदाहरण मै हुँ । कम पैसामा बिनाझन्झट गन्तव्यमा पुगिने भएकाले राजधानीभित्रको यात्राको सास्ती निमिट्यान्न हुने आशा राखियो । त्यसो त हामीलाई सानै उपलब्धिमा अचाक्ली उत्साही भइहाल्न कसले भ्याउने ?
अनुभवीले सुझाए, टुटलभन्दा पठाओ सस्तो छ । त्यसैले पठाओ डाउनलोड गरें ।
त्यतिबेला प्रयोगकर्ता मात्र होइन, राइडर पनि ह्वात्तै बढेका थिए । प्रायः सबै मिलनसार, बोलीचाली उस्तै मीठो । वनस्थलीबाट नियमित थापाथली आउनुपर्ने, १ सय १७ तिरे पुग्ने । म दंग । सर्च गरेको दुई चार मिनेटमै राइडर भनेको ठाउँमा आइपुग्ने । महिना दिन जति यसरी नै बित्यो । एक्कासि त्यही दूरीको भाडा १ सय ४८ पुग्यो । पहिले वनस्थली–बालाजु–लैनचौर–सिंहदरबार–थापाथलीको रुट देखाउँथ्यो, अब घरी कलंकी पुर्‍याउन थाल्यो, घरी सीतापाइला । सिस्टममा केही समस्या होला भन्ठानेर दुई चार दिन त्यतिकै बसे । तर पहिलेको भाडादरमा जान पाइएन, अफिस टाइममा अझ बढी पैसा लाग्ने । फोनमा सबै गुनासो पोखें । जवाफ आयो, ‘के भएको रहेछ हेर्छौं र तपाईंलाई खबर गर्छौं ।’
दुई हप्ता बित्यो, न खबर आयो, न साविक रुट देखायो । बिस्तारै राइडरको व्यवहार बदलिन थाल्यो । पठाओले भाडाको १० बाट १५ प्रतिशत काट्न थालेको, पहिलेजस्तो सुविधा नदिएको गुनासो यात्राभर सुन्नुपर्थ्यो । कत्ति त, ठाडै ‘मिलाएर दिनु है’ भन्न थाले । कोही ‘रिक्वेस्ट क्यान्सिल गर्नुस्, त्यहाँ तोके जतिमा पुर्‍याइदिन्छु’ भन्थे । पठाओले कहिलेकाहीँ केही रकम छुट दिन्थ्यो, त्यो सुविधा प्रयोग गर्‍यो भने राइडर नै नभेटिने । अर्को ट्रिप भ्याउने लोभमा कोही बत्ताउँथे । त्यसमाथि पठाओको एप्समा चुस्त नभएर उस्तै तनाव । मोबाइल डाटाबाट चलाइरहेको हुन्छ, एप्स अपडेट नगरी चल्दै–नचल्ने । कहिले लोकेसन पत्ता लगाउनै दसौं मिनेट लाग्ने । गुनासो पोख्दा–पोख्दा हैरान ! थप तनाव नलिने, बरु पठाओ चलाउनै छोड्ने क्रान्तिकारी निर्णय गरियो ।
कत्तिले भन्न थाले, टुटल अलि सिस्टेमेटिक छ ।
टुटलिङका सुरुआती दिन सुखदै रह्यो । तर विश्वास टुट्न धेरै समय कुर्नुपरेन । नयाँ–नयाँ स्वरूपका सास्ती आइलाग्न थाल्यो । जस्तो ः एक दिन थापाथलीबाट दरबारमार्ग जान रिक्वेस्ट गरें । एक छिनमा राइडर आइपुगे, थोत्रो बाइक लिएर, चढ्नै पट्यार लाग्ने । तर के गर्नु, चढ्नु परिहाल्यो । सिहंदरबार हुँदै जाऊँ भन्दै थिएँ, उनले त्रिपुरेश्वरतिर लगे । पम्पअगाडि लगेर रोके र भनें, ‘तपाईंले कति दिनुपर्ने हो, पेट्रोल हालिदिनुस् ।’ अचम्भित भएँ किनभने भाडा जम्मा ६० उठेको थियो, त्यो पनि मैले टुटल ब्यालेन्सबाट तिरिसकेको थिएँ । उनलाई बेलिविस्तार लगाएँ, टेर्दै–टेर्दैनन् । बाइकमा पेट्रोल र आफूसँग पैसा नभएको दुखेसो पोखेँ । यस्तो बेला तपाईं के गर्नुहुन्छ ? मैलेचाहिँ खुरुक्क ६० दिएँ । बल्ल भटभटे गुड्यो । पछि थाहा भयो, बाइक साथीको रहेछ । उनलाई टुटल ब्यालेन्सबाट पनि भाडा तिर्न सकिन्छ भनेर थाहै रहेनछ ।
उदेक लाग्छ, कति राइडरलाई राम्रोसँग एप्स चलाउनै आउँदैन । एसेप्ट हुन्छ, पछि फोनमा भन्छन्, ‘ला मैले त झुक्किएर गरेछु, टाढा छु । तपाईं क्यान्सिल गर्नुस् न ।’ नेभिगेसन गरेको लोकेसनमा आइपुग्ने राइडर त असाध्यै कम हुन्छन् । कोही बेतोडले बत्ताउँछन्, अलि बिस्तार हाँक्नु न भन्यो भने ‘बाइक चढ्ने गर्नुभएको छैन’ भनेर मजाक गर्छन् । मोबाइलमा एउटा बाइक नम्बरबाट एसेप्ट भएको देखाउँछ, बाइक आउँछ अर्कै । यात्रा गर्दा आफ्नै मुडमा भइन्छ, प्रत्येक पटक गुनासो पोखेर साध्य हुन्छ ? प्रविधिको उच्च सदुपयोग भनेको यही हो ? खासमा टुटल–पठाओबीच राइडर्स थप्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भद्रगोल हुँदै गएको छनक मिल्छ । राइडरलाई स्वीकृति दिनुपूर्व यात्रुलाई गर्ने व्यवहार, एप्स चलाउने तरिकाजस्ता आधारभूत ज्ञान दिनुपर्ने होइन र ?
यात्रुको सुरक्षाको ताल उस्तै बेहाल छ ।
टुटलले सन् २०१७ जनवरी र पठाओले सन् २०१८ सेप्टेम्बरबाट दुईपाङग्रे यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन् । यदि उनीहरू यात्रुको सुरक्षामा संवेदनशील हुन्थे भने त्यतिबेलैबाट हेल्मेट अनिवार्य गर्थे । तर अहिलेसम्म छैन । ट्याक्सी चालकले नराम्रो व्यवहार गरे, मिटरमा जान नमाने ट्राफिकलाई खबर गर्न सकिन्छ । धेरै हदसम्म ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ । तर टुटल–पठाओबाट दुर्व्यवहार भोग्नुपर्‍यो, ठगिनुपर्‍यो भने कहाँ जाने ? ट्राफिकले त उनीहरूलाई उसै पनि देखिसहँदैन । त्यसैले उल्टै खुच्चिङ भन्ला भन्ने डर । यात्रुको बिमा खै ? त्यसैले करको मामलामा मात्र होइन, सञ्चालन शैलीमा पनि टुटल–पठाओलाई उचित दायरामा ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ । बन्द होइन, नियमन चाहिएको छ ।
पछिल्लो एक महिनाको मेरो अनुभवले भन्छ, ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक यातायातबाट आजित भएका यात्रुलाई टुटल–पठाओ ‘तावाबाट उम्केर भुग्रोमा परे’ जस्तो हुँदै छ । यिनीहरूको साख र विश्वसनीयता सखाप भइसकेको छैन, धर्मराएको चाहिँ पक्कै हो । सुध्रिए टिक्लिान् । अन्यथा, स्वतः बहिष्कृत हुनेछन् ।
बजारको नियम यही हो ।
बजारबाहेक अर्को नियमचाहिँ सरकार, स्थानीय सरकार वा महानगरहरूका लागि छ । त्यो हो— गतिलो सार्वजनिक यातायातका लागि पहल । चालीस–पचास लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं सहरको सार्वजनिक यातायात १० सिटे ट्याम्पु र १५ सिटे माइक्रोलाई लगाएर महानगर घुरेर सुत्न मिल्छ ? मुख्य रुटमा एकै पटकमा धेरै मानिस बोक्न सक्ने (कम्तीमा साझा बस जत्रा) ठूला बसलाई रुट र समयतालिका तोकेर नचलाउने हो भने अब काठमाडौंमा आफ्नै सवारी नहुनेले यात्रा गर्न मुस्किल छ । फुटपाथ यसै पनि छेउकै सटरवालाको कब्जामा छ, बाँकी ठाउँमा पार्किङ । सार्वजनिक यातायात नसुध्रेसम्म टुटल वा पठाओजस्ता सेवा क्षणिक सुविधाका मात्र कुरा हुन्, यी समाधान होइनन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ १०:५३
छोटै भूमिकाबाट फिल्ममा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल अभिनेत्री हुन्, लक्ष्मी बर्देवा । बुलबुलको टेम्पो चालकको चरित्रबाटै उनले मुख्य भूमिकामै काम गर्ने अन्य कतिपय हिरोइनभन्दा ज्यादा तारिफ पाइन् ।
जेष्ठ ३, २०७६ गोकर्ण गौतम
अस्पताल जाँदा डाक्टर बन्न मन लाग्थ्यो, स्कुल जाँदा शिक्षक  । गीत सुन्दा गायक बन्न मन लाग्थ्यो, भाषण सुन्दा नेता  ।
जे देख्यो, त्यही बन्न मन लाग्ने । किशोरावस्थामा लाग्दै गर्दा सबैलाई यस्तै हुन्छ । लक्ष्मी बर्देवाचाहिँ अलि बढी नै अस्थिर थिइन । कम्तीमा उनलाई त्यस्तै लाग्छ । उद्देश्यहरू छिटो–छिटो बदलिन्थे । तर एउटै जीवनमा अनेक व्यक्तित्व निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ र ? यस्तै लाग्थ्यो उनलाई । प्लस टु सकेपछि यो बेचैन मनले बाटो पायो । त्यो भनेको, अभिनय । उनी हाँस्दै सुनाउँछिन्, ‘अभिनयलाई पेसा बनाउँदा घरि एकथोक बन्न पाइने, घरि अर्को थोक । एउटै जीवनकालमा अनेक स्वाद चाख्न पाइने ।’ अनि, के चाहियो, लक्ष्मी कम्मर कसेर लागिन्, कलाकार बन्न । के उनका सपनाहरू पूरा भए त ? भन्छिन्, ‘कति पूरा भए, कति बाँकी छन् । संघर्ष जारी छ ।’
लक्ष्मी सन्तुष्टि हुने आधारहरू धेरै छन् । उनी अभिनय संसारमा डुबुल्की मारेको पाँच वर्ष पुग्दैछ । यसबीचमा यावत् चरित्रको अनुभव सँगाल्न पाएकी छन् । जस्तो ः बुलबुल फिल्ममा टेम्पो ड्राइभर बनिन्, घामपानीमा भट्टी साहुनी । हरिमा छुच्ची पत्नी अनि कागजपत्रमा हिंसा पीडित । डमरुको डन्डिबियोमा खेलाडी । त्यस्तै, नाटक जारमा आफूभन्दा धेरै सानो उमेरकी बच्ची बनिन् भने माथा पञ्चरमा ६५ वर्षकी वृद्धा, जसको जीवनमा वियोग र वेदनाबाहेक केही हुन्न । नेता बन्ने चाह पूरा भयो, कथा एक्सप्रेसमा । अर्को नाटक १२ दुर्वशामा चाहिँ वकिलका रूपमा धारण गरिन् । साँच्चै, अलग र गम्भीर प्रकृतिका भूमिकालाई जीवन्त बनाएकी छन् । यसकै फल हो, नेपाली फिल्म र थिएटरका दर्शकमाझ लक्ष्मी प्रिय हुँदै जानु । फिल्ममा सहायक भूमिकाबाटै ‘मार्क’ हुने सामर्थ्य छ उनमा । यात्रा लामो छ । तर यहींसम्म आइपुग्नै पनि चुनौतीका पहाड छिचोलेकी छन् ।
अभिनयले आफ्नो इच्छा पूरा हुन्छ भन्ने हेक्का त भयो तर अभिनय कसरी गर्ने ? लक्ष्मी पूरै अनभिज्ञ थिइन् । काठमाडौंमै जन्मे–हुर्के पनि उनका आफन्त र साथीभाइ कलाकारितासँग जोडिएका थिएनन् । उनीचाहिँ जसरीतसरी अभिनय सिक्न लागिपरिन् । सुरुमा सम्पर्क गरिन्, एक्टर्स स्टुडियोमा । तर त्यहाँ एउटा सेसन भर्खर सकिएको रहेछ, नयाँ सेसन सुरु हुन समय लाग्ने भयो । लक्ष्मीलाई थियो हतारो । सोही कारण एक्टर्स स्टुडियोमै जोडिएका आशान्त शर्मालाई तारन्तार फोन गर्न थालिन् । ती दिनहरू सम्झँदै भन्छिन्, ‘मलाई एउटा बाटो समात्नु थियो, अभिनय सिक्न पाएँ भने केही गर्न सक्थें कि भन्ने लाग्थ्यो । त्यही भएर आशान्त सरलाई फोन गरेर हैरान पार्थें ।’ उनको निरन्तरको लगावले हुनुपर्छ, उम्बुकल्यान्डको मुठभेड नाटक निर्देशन गर्ने भएपछि आशान्तले उनलाई सम्पर्क गरे । तर अभिनय गर्न होइन, सिर्फ रिहर्सल हेर्न ।
लक्ष्मीचाहिँ यसमै दंग थिइन् । नाटकका विषयमा कलाकारबीच छलफल भएको, चरित्रलाई निखारेको, एकअर्कालाई साथ दिँदै अभिनयको अभ्यास गरेको नियाल्न थालिन् । आशान्तलाई सहयोग गर्नु उनको अर्को जिम्मेवारी थियो । तर संयोग रिहर्सलकै सिलसिलामा एक कलाकार आउन नसक्ने भए । अब कसले गर्ने त ? त्यो भूमिका पर्‍यो, लक्ष्मीको भागमा । उनी स्टेजसँग डराउँथिन्, आशान्त स्टेजसँग प्रेम गर्न सिकाउँथे । एवं रीतले नाटक खेल्ने भइन् । मानसिक रूपमा एउटै अलग्गै ‘जोन’ मा पुगेको आभास हुन थाल्यो ।
नाटक सकिनै लागेपछि चाहिँ चिन्ता थपिँदै गयो, अब के गर्ने भनेर ? त्यसमाथि उक्त नाटकले अभिनयप्रतिको प्यास अझ बढाएको थियो । मण्डलाको आर्टिस्टिक माहोल छोडेर अन्त जान मन थिएन । त्यहीं स्वयंसेवक बन्न खोजिन् तर मेलोमेसो मिलेन । अनि, उनकै शब्दमा, घरमै थन्किनु पर्‍यो । बडो उकुसमुकुसको समय थियो त्यो । केही समयपछि मण्डलामा अभिनय प्रशिक्षणको आवेदन खुल्यो । तीन महिनाको २० हजार तिर्नुपर्ने । कहाँबाट ल्याउनु ? तर उम्बुकल्यान्डको मुठमेडबाटै लक्ष्मीको अभिनय प्रेमलाई निकालिरहेका मण्डलाका राजन खतिवडाले आधा रकम छात्रवृत्ति दिने कबुल गरे । त्यसैले, घरमा लामो समयमा रापमा पिल्सिनु परेन ।
पहिलो नाटक खेलेपछि लक्ष्मीमा अभिनय गर्न सक्छु, मैले पनि जान्या छु भन्ने आत्मविश्वास पलाएको थियो । जब सुनील पोखरेलसँग सिक्न थालिन्, आत्मविश्वास विलिन हुन थाल्यो । भेउ पाउँदै गइन्, सिक्न धेरै बाँकी रहेछ । उनी मुस्कुराउँछिन्, ‘के–के न जान्या छुजस्तो लाग्या थियो तर जान्नुपर्ने त कत्ति हो, कत्ति बाँकी रहेछ ।’ तर सिक्ने भोक कहिले हराएन, जसले उनलाई परिपक्व बनाउँदै गयो । प्रशिक्षणकै दौरान सुनकेशरी नाटकमा सुनकेशरीकी आमा बन्न पाइन्, यसले आत्मविश्वासलाई धेरथोर पुनः जागृत गर्‍यो ।
यहाँसम्म आइपुग्दा आमाबाहेक घरमा कसैलाई भनेकी थिइनन् । अनामनगरमा जागिर खान थाल्या छु भनेर घरबाट निस्कन्थिन् । बुबालाई नभन्नुको कारण थियो । एउटा भिडियो खेलेकी थिइन्, उत्साही हुँदै बुबालाई देखाइन् । स्याबासीको अपेक्षा थियो तर बुबाको कुनै प्रतिक्रिया आएन । त्यो मौनताको अर्थ बुझिन् । त्यसैले अभिनय गर्न थालेको भन्नै चाहिनन् । भन्छिन्, ‘माथा पञ्चर हेरेपछि चाहिँ बुबाले पनि प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँलाई खुब मन परेछ ।’ यसपछि नै हो, लक्ष्मीले भटाभट नाटक खेल्न थालेको । यसरी थिएटरमा चम्कँदै गर्दा हो, रामबाबु गुरुङले अफर गरेको, फिल्म घामपानीका लागि । रामबाबु उक्त फिल्मका निर्माता थिए ।
फिल्ममा पनि लक्ष्मीले मुख्य भूमिका खास पाएकी छैनन् तर सुखद पक्षचाहिँ पर्दामा थोरै समय देखिने चरित्र नै अभिनयकला पस्कन काफी भइदिन्छ उनका लागि । पात्रलाई चिन्ने र आत्मसात् गर्ने क्षमता छ उनीसँग । ‘मलाई मुख्य भूमिकामै काम गर्ने रहर नभएको होइन,’ साहित्य लेखनमा समेत सक्रिय यी अभिनेत्री भन्छिन्, ‘तर लम्बाइ लामो भएको चरित्रमात्र भएर हुन्न । छोटै भए पनि बलियो भूमिका भए पुग्छ । त्यसलाई जीवन्त बनाउन लागिपर्छु ।’ सायद यही कारण हुनुपर्छ, लामो भूमिका नपाएर कुनै दुःख छैन । बुलबुलको टेम्पो चालकको चरित्रबाटै उनले मुख्य भूमिकामै काम गर्ने अन्य कतिपय हिरोइनभन्दा ज्यादा तारिफ पाइन् । आखिर, कलाकारको धर्म पनि पाएको चरित्रलाई जीवन्त बनाउनु न हो ।
फिल्म र नाटकका अलावा लक्ष्मी म्युजिक भिडियोमा पनि बेलामौकामा झुल्किने गर्छिन् । यतिबेला उनले दयाहाङ राईसँग काम गरेको ‘परानै दिन्छु...’ बोलको गीत चर्चामा छ । यस अगाडि कामेश्वर चौरासिया र उनले अभिनय गरेको ‘ल्याइदिउँला तिलहरी...’ पनि रुचाइएको थियो । नाटक निर्देशनका लागि आफूलाई तयार पार्दैछिन् । र, यी हरेक पाइलामा उनलाई साथ दिँदैछन्, उनका पति जीवन भट्टराई । लक्ष्मीले गत माघमा विवाह गरेकी हुन् । जीवन पनि फिल्म र थिएटरमा संघर्षरत अभिनेता हुन् । खुसी हुँदै सुनाइन्, ‘उही कर्ममा क्रियाशीलसँग विवाह गर्दा एउटै गन्तव्यमा पुग्न एउटै बसमा यात्रा गरिरहेजस्तो सुखानुभूति हुँदोरहेछ । एकअर्कालाई साथ दिँदा आत्मविश्वास बढ्दोरहेछ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ११:४५